Manchester United oo haddii uu ka tago Lukaku la soo wareegeysa mid ka mid ah Weeraryahannada kooxda Arsenal – Gool FM
(Manchester) 26 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo sheegayaa inay la soo wareegayso dhaliyaha Aubameyang haddii uu ka tago Lukaku oo uu ku biiro Inter Milan.
Warsidaha Corriere dello Sport ayaa warinaya in Weeraryahanka Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang uu u soo dhaqaaqi karo kooxda Manchester United haddii Romelu Lukaku uu aado dhinaca Inter.
Kooxda ka dhisan horyaalka Serie A ayaa si xoog leh loola xiriirinayaa inay soo xero gelinayaa xiddiga xulka qaranka Belgium, iyadoo wakiilka laacibkan ee Federico Pastorello uu sheegay in ciyaaryahanku uu doonayo inuu ka tago Manchester United, isla markaana Inter Milan ay doonayso saxiixiisa.
Waxaa macquul ah in Romelu Lukaku uu u dhaqaaqo kooxda reer Talyaani ee Inter Milan haddii ay taasi dhacdana waxaa la leeyahay xiddiga ka soo jeeda qaaradda Afrika ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ku biiri kara kooxda ka dhisan garoonka Old Trafford.
Dhinaca kale Aubameyang kaasoo garoonka Emirates ku sugnaa tan iyo bishii Janaayo sanadkii 2018-kii ayaa dhaliyey 22 gool oo horyaalka Preier League 36 kulan oo uu ciyaaray xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.